Sunniyaha cawlan - Sideen u qariyaa | Bezzia
Talaabooyinka lagu qariyo timaha cirrada sunnayaasha
Susana godoy | 15/06/2022 12:00 | Quruxda
Ma doonaysaa inaad qariso timaha cawlan ee sunniyahaaga? Markaa waxaanu haynaa tabo taxane ah oo ay tahay inaad ku dhaqan gasho. Waxaa caadi ah in maalin maalmaha ka mid ah, annagoo meeshan ku dul-daaqaya, aan aragno sida timo kale oo cad-cad ay ula wareegeen. Waa waqtigii wax la samayn lahaa si aad uga dhigto cirifka oo dhan mid midab isku mid ah.
Maxaan timo cirro ugu yeeshay sunniyahayga? Sababtoo ah luminta sii socota ee melanin, waxaan bilaabeynaa inaan aragno timo cad. Laakiin ma aha oo kaliya in sunnayaasha, laakiin timaha ayaa hubaal ah inay sidoo kale yeelan doonaan kooda. Waa inaadan ka welwelin sababtoo ah had iyo jeer waxaa jira tillaabooyin taxane ah iyo talooyin aad ku dhaqmi karto sida ugu dhakhsaha badan. Soo hel wax kasta oo aan keeno!
1 Qari sunnayaasha cawlan ee isqurxinta leh
2 midabka suniyaha
3 Daawooyinka guriga ee sunniyaha cawl
Qari sunnayaasha cawlan ee isqurxinta leh
Sidaad ogtahay, isqurxintu waa mid ka mid ah caawimada weyn ee aan heli karno. Sababtoo ah haddii ay ku saabsan tahay is-jiid-jiid, waxay buuxin doontaa hawsheeda. Dabcan waa in aan mar walba dooranaa alaabta ugu fiican, iyo kuwa gaarka ah. Xaaladdan oo kale waxaad heli kartaa qalin suniyaha ah ama, oo leh qurxiyo sidoo kale loogu talagalay sunnayaasha. Haddii aad leedahay barar khafiif ah, markaa waxa fiican inaad doorato qalin ama midab ka yara fudud hadhkaaga..
Iyadoo Haddii aad leedahay timo madow, ka dibna tag hal ama laba ka sii madow. Markaad doorato, waa inaad si fiican u shanlaysaa sunnayaasha si midabku si siman u kala firdhiyo. Waxaad sawiri doontaa xadhkaha sunnayaashaada oo aad si taxadar leh u buuxin doontaa. Midda dambe waxaad ku caawin kartaa naftaada burush. Tani waa inay noqotaa mid aad u fiican, si ay u yeelato saxsanaan dheeraad ah. Waxa kale oo aad sidaas oo kale ku samayn kartaa qalinka ka dibna si khafiif ah u xoqin burushka. Fikradda ayaa ah in aagga la daboolay laakiin leh dhammaadka dabiiciga ah.
Sida aan u haysanno midabyo si aan u awoodno inaan muujinno midabyo kala duwan oo timahayaga ah, marka la eego sunnayaasha waxaa sidoo kale jira kuwo gaar ah. Sidan ayaad timaha cad ugu qarin kartaa indho birqaarka. Haa runtii, Ha ku rinjiyin sunnayaasha dheeha timaha, sababtoo ah waxaad yeelan kartaa xanaaq meesha. Sidaa darteed, waa inaad soo iibsataa midab gaar ah oo aad raacdo tilmaamaha. Kuwani badanaa waxay ku dabaqayaan jihada koritaanka timaha, laakiin ka dibna jihada ka soo horjeeda. Sidan ayaanu ku hubinaynaa in dhammaan si fiican loo daboolay. Waxaan sugi doonaa wax ka yar 10 daqiiqo waana taas. Waxaa jira dhowr guri oo leh midab suniyaal ah oo qaarkood horeyba u heystaan ​​alaab sax ah oo qaab qalin ah si ay u fududaato howsha.
Daawooyinka guriga ee sunniyaha cawl
Dhinac waxaad samayn kartaa chamomile sida caadiga ah. Marka ay hore u qabow tahay, waa inaad ku qastaa afar qaado oo ah a qanjaruufo turmeric (wax ka yar nus qaaddo). Hadda, si fiican ayaanu isugu dari doonaa oo waxay noqon doontaa diyaar in la codsado. Dabcan, way fiicantahay in lagu sameeyo burush. Waxaad ka tagaysaa kaliya 5 daqiiqo oo biyo ku raaci.
Sidoo kale codso qaar faleebo shaaha madow Waa wax ku ool ah. Sababtoo ah kani wuxuu leeyahay midabyo qarin doona timaha cirrada. Laakiin waa run in ay tahay ku meel gaar.
qaxwaha iyo kookaha waa mid kale oo ka mid ah maaddooyinka waaweyn ee aan isku darno waxay siin karaan sunnayaashayada midab madow, iyagoo macsalaameynaya timo cad. Waa inay noqotaa qaxwo madow oo leh budada kookaha iyo wax kasta oo si fiican isku dhafan. Haddii isku dhafka ay soo baxdo aad u biyo ah, markaa waxaad ku dari kartaa malab yar. Waxa aad ku arki doontaa sida ay ugu dheggan tahay maqaarkaaga.
Sida aad ogtahay, dhammaan tabahani waxay siin doonaan midabka timaha, laakiin si macquul ah ma sii jiri doonaan. Waxaa si fudud loo odhan karaa waxay ku fiicnaan doonaan inay dhibaatada ka baxaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Quruxda » Talaabooyinka lagu qariyo timaha cirrada sunnayaasha
Maxay yiraahdeen bisadaha waxay leeyihiin 7 nolol?
Iimayl suuqgeyneed, qalab muhiim u ah ganacsigaaga